Voampanga ho nanao fanararaotana ara-nofo tamina vehivavy iray ny lehilahy anankiray. Notondroin'ity vehivavy ity ho nanao izany izy nandritra ny famotopotorana ireo voampanga tamin'izany. Na dia tsy misy mazava aza ny porofo maha-meloka azy dia niziriziry tamin'ny heviny ilay vehivavy ka nilaza fa i "Johnny" no nanao izany heloka izany.
Nampidirina am-ponja i Johnny, araka izany. Nijanona tao an-tranomaizina nandritra ny 14 taona noho ny heloka tsy nataony akory izy. Nony hita ny porofo, tamin'ny alalan'ny "ADN", izay nandiso ny fanamelohana azy vao nahatsapa ilay vehivavy, "Joan" , fa nanao hadisoana.
Naniry ny hihaona tamin'i Johnny izy taorian'ny nivoahan'ity farany ny fonja. Inona ary no hataon'ity lehilahy izay niaritra fahoriana be ity rehefa mifanatrika amin'ilay vehivavy izay nanimba ny fiainany nandritra ny taona maro?
Tao anaty efitrano iray ilay vehivavy, niandry an'i Johnny hiditra. Rehefa niditra izy dia nifampijery izy ireo, nitomany i Joan.
"Niondrika i Johnny ary nandray ny tanako, nijery ahy izy ary niteny hoe: mamela anao aho." Tsy nampino tokoa izany. Indro lehilahy iray izay nankahalaiko sy niriko ho faty, no eo anoloako ary milaza amiko, dia izaho izay nanao ny tsy rariny taminy, fa mamela ny heloko izy! Tamin'izay fotoana izay vao nanomboka takatro ny atao hoe fahasoavana, ary tamin'izay ihany koa vao nanomboka sitrana sy nahazo fitoniana aho."
Hojerentsika amin'ity herinandro ity ny momba ny famelan-keloka sy ny vokatr'izany eo amin'ny fon'olombelona tsy mety manam-pitoniana.
Miatrika ny lasa
Tsara ny fiafaran'ny tantaran'i Josefa taorian'ireo toe-javatra rehetra niainany. Tsy hoe nivoaka ny tranomaizina fotsiny izy fa tonga praiminisitr'i Egipta rehefa avy nanazava ny nofin'i Farao (Gen. 41). Nanambady izy ary nanan-janaka roa (Gen. 4 I : 50-52). Feno ny trano fitehirizam-bokatra tao Egipta, nanomboka ilay mosary efa nambarany mialoha. Ary indray andro dia tonga tany Egipta ireo rahalahin'i Josefa.
Vakio ny tantaran'ny nihaonan'i Josefa sy ireo rahalahiny voalohany ao amin'ny Gen. 42:7-20. Inona ny anton'ny fihetsika nataon'i Josefa? Inona ny tanjona nokendreny tamin'izany fihaonana voalohany izany?
Nanam-pahefana i Josefa ary azony natao tokoa ny namaly faty ireo rahalahiny, tsy mila manamarin-tena ny amin'izany akory izy. Tsy namaly faty anefa izy fa nitebiteby ny amin'ireo fianakaviany tao an-tranon-drainy aza. Sahirana ny sainy noho ny amin-drainy. Moa ve izy mbola velona any, sa tonga kamboty ray ilay fianakaviana mikorontana? Ahoana ny amin'i Benjamina rahalahiny, izay fifaliana sy fahasambaran-drainy tahaka azy fahiny? Moa ve nafindran'ireo rahalahiny tamin'i Benjamina ny fialonan'izy ireo mampidi-doza? Afaka manara-maso ireo olona osa tao amin'ny fianakaviany ireo izy ankehitriny, ary izany indrindra no ataony izao.
Ny fampiharana ireo fitsipika ara-Baiboly eo amin'ny fifandraisantsika dia tsy midika fa azontsika atao ny manaiky na tokony hekentsika ny tsy rariny atao amintsika. Sarobidy eo imason'Andriamanitra mantsy ny tsirairay avy amintsika satria efa nandoavan'i Jesôsy ny sanda ambony indrindra teo amin'ny hazo fijaliana.
Nahoana no mahakasika an'i Jesôsy manokana ny herisetra na ny fanaovana tsinontsinona ny hafa? Vakio ny Mat. 25:41-46.
Novidina tamin'ny ran'i Jesôsy avokoa isika, ary Azy ara-dalana. Izay manao ny tsy rariny amin'ny Azy dia toy ny mamely Azy. Tsy tokony ho hita eo anivon'ny ankohonana mihitsy ny fanararaotana ara-nofo sy ny herisetra ara-batana na ara-pihetsehampo. Tsy raharaha mahakasika ny ankohonana irery, izay tokony hovahana ao amin'ny tokantrano ihany izany, fa mila ny fanampiana sy fidirana an-tsehatry ny olon-kafa aty ivelany. Aoka ianao na ny olona ao amin'ny fianakavianao izay hiharan'ny herisetra hitady fanampiana amin'ny manam-pahaizana manokana azo itokiana.
Mety ho sarotra ny fifandraisan'ny mpianakavy lalovanao amin'izao fotoana izao, inona ny fitsipika ara-Baiboly tokony hampiharinao eo anatrehan'izany?
Namela ny heloky ny rahalahiny i Josefa. Tsy fantatsika mazava tsara ny fotoana nanaovany izany saingy azo antoka fa efa nataony talohan'ny nahatongavan'ireo rahalahiny tany Egipta izany. Azo heverina fa tsy ho nambinina izy tany Egipta raha tsy namela heloka, satria ho nikiky ny fanahiny ka nanimba ny fifandraisany tamin'Andriamanitra ny fahatezerana sy ny otripo.
Fandinihana maro no natao tamin'ireo olona niharan'ny herisetra, indrindra ireo tratry ny fampahoriana nahatsiravina, hita tamin'izany fa ny famelan-keloka no teboka iray lehibe nahazoany fahasitranana sy niarenan'ny fiainany indray. Mijanona eo amin'ny toerana mahonena misy azy ny olona izay tsy mamela heloka. Mahakasika antsika kokoa ny famelan-keloka fa tsy ny olona iray na maro izay nanao ratsy tamintsika.
Na dia namela ny heloky ny rahalahiny aza i Josefa, dia tsy tiany ny hamela ny fifandraisan'ny mpianakavy ho tahaka ny tamin'ny fotoana niarahany tamin'izy ireo farany, izany hoe tao an-davaka maina tany Dotana. Tiany ho fantatra raha efa niova ireo rahalahiny.
Inona ny resaka ren'i Josefa nifanaovan'ireo rahalahiny? Vakio ny Gen. 42:21-24.
Nisy mpandika teny nandika ny tenin'izy ireo ka tsy fantatr'ireo rahalahiny fa nahafantatra ny teniny i Josefa. Reny ny fiaiken'ireo rahalahiny. Nihevitra ireo rahalahiny ireo fa tsy ho tanteraka ny nofin'i Josefa raha amidiny ho andevo izy, tsy ho tonga any amin-drainy koa ny tatitra ratsy momba azy ireo, ary tsy hahita ny rainy hiangatra an'i Josefa intsony izy ireo. Tsy nahita fitoniana anefa izy ireo tamin'izany fa nanjary nanamelo-tena nandritra ny taona maro indray aza. Niteraka fitebitebena sy tahotra ny famaizan'Andriamanitra izay nampahalemy azy ny asa nataon'izy ireo. Nampalahelo an'i Josefa ny nahita ny fahorian'izy ireo ka nitomany izy.
Fantatr'i Josefa fa mbola haharitra taona maro ny mosary ka nasainy nentin'izy ireo miverina miaraka aminy hividy vary i Benjamina (Gen. 42:20). Nofatorany ihany koa i Simeona (Gen. 42:24).
Rehefa hitany fa mbola velona ihany i Benjamina dia nanao fanasana ho azy ireo izy, nomeny anjara-hanina betsaka indrindra i Benjamina mba hahitany raha mbola ao amin'ireo rahalahiny ny fialonana tao anatin'izy ireo taloha (Gen. 43:34). Tsy naneho fihetsika mitory fialonana ireo rahalahiny, kanefa fantatr'i Josefa ny hafetsen'ireo. Efa namitaka tanana iray manontolo aza izy ireo (Gen. 34:13) ka azon'i Josefa an-tsaina fa tsy maintsy ho nandainga tamin-drainy ny amin'izay niafarany izy ireo (Gen. 37:31-34). Lehibe kokoa noho izany ny fizahan-toetra nataony azy ireo taorian'izany (jereo ny Gen. 44).
Vakio ny Gen. 45:1-15. Inona no asehon'izany mikasika ny fihetsehampon'i Josefa teo anatrehan'ny rahalahiny sy ny namelany ny helok'izy ireo? Inona ny lesona tokony hotsoahintsika avy amin'io tantara io?
Mamela heloka sy manadino hoe?
Toy izao no namaritana ny famelan-keloka: fanekena hamoy ny zo hanao otripo sy hanameloka ary hamaly faty ny olona na vondron'olona nanao ny tsy rariny tamin'ny tena. Mpitsabo ny olana ara-psikolojian'ny fianakaviana ny dokotera Marilyn Armour, niasa teo amin'ireo sisa velona taorian'ny fampahorian'ny "nazis" ny Jiosy tamin'ny Ady lehibe II izy mba hahalalany izay nataon'ireo sisa velona sy hahatakarany izay nanjo azy ireo. Izao no nosoratany: "Ny famelan-keloka dia ataon'ilay niharam-pahavoazana an-tsitrapo fa tsy zavatra mitranga ho azy tsy akory."
Ny hoe mamela heloka dia tsy midika fa tsy hisy vokany ny tsy rariny. Tsy midika ho famelana ilay nanao herisetra hanohy ny toetra ratsiny izany. Ny famelan-keloka dia midika fa avelantsika ho an'Andriamanitra ny fahatezarana sy ny famaliana, raha tsy izany dia ho ratsy kokoa noho izay efa nataon'ilay olona tamintsika no hateraky ny fahatezerana sy ny fangidiana ary ny otripo sy ny fankahalana.
lnona no entin'ny famelana ny heloky ny hafa ho antsika? Saino ny voalazan'ny Mat. 18:21-35.
Tsy isalasalana fa tsiambaratelo iray hahaizana mamela heloka ny fahatakarana ny namelan'i Kristy ny helotsika. Samy efa nanota isika rehetra, tsy tamin'ny hafa ihany fa tamin'Andriamanitra ihany koa.
Ny fahotana rehetra dia natao tamin'llay Tompo sy Mpanao antsika kanefa azontsika atao ny mangataka famelana ho an'ireny rehetra ireny ao amin'i Jesôsy; tsy noho ny maha-mendrika izany antsika (tsy mendrika izany isika), fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika. Raha vao takatsika izany fahamarinana masina izany, raha vao raisintsika izany famelan-keloka izany, raha vao raisintsika ho zava-misy ny famelan'Andriamanitra ny helotsika dia manomboka haintsika ny mamalona ny lasa sy mamela ny heloky ny hafa. Tsy hoe mendrika ny havela heloka ny hafa, fa mamela heloka isika satria efa nomen'Andriamanitra izany ary koa mila izany. Impiry tokoa moa isika no mendrika havela heloka?
Hitantsika ihany koa fa mbola namindra fo hanavotana ny fifandraisan'ny fianakaviany i Josefa. Tsy nitahiry lolompo izy ary tsy namerimberina ny zava-niseho tamin'ny lasa.
Toa tsy azo heverina ny hisian'ny filaminana indray ao amin'ny fianakaviana izay lasa za-draharaha amin'ny fitadiavana ny fomba handratrana ny hafa. Tsy tahaka izany anefa ny fomba fisainan'i Josefa. Hita fa niriny ny hamalonan'izy ireo ny lasa sy handrosoany amim-pitiavana sy amim-panekena ny lasa. Raha hafa noho izany ny fomba fisainan'i Josefa dia tsy ho tsara tahaka izany ny fiafaran'ny tantara.
"Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra izay olona tsy hisain'i Jehôvah heloka."- Rom. 4:7, 8. lnona no ambaran'i Paoly amintsika ny amin'izay nomena antsika ao amin'i Jesôsy ? Ahoana no tokony ho fiantraikan'izany teny fikasana mahafinaritra izany eo amin'ny fihetsika ataontsika amin'ireo nandratra antsika?
Tokony hiaiky ny olona iray fa naratra mba hahafahany mamela heloka. Mety ho sarotra ny manao izany satria misy fotoana ananantsika fironana hanototra ny fihetsehampontsika raha tokony hamaha ny olana misy isika. Mety ny miaiky eo anatrehan'Andriamanitra fa nihazona lolompo na koa hatezerana ianao; hitantsika matetika ao amin'ny Salamo ny toy izany. Azon'ny olona iray atao ny milaza amin'Andriamanitra fa tsy tiany ny toe-javatra nitranga, na izay nataon'ny hafa taminy mampalahelo na/sy mahatezitra azy.
Hitantsika ao amin'ny tantaran'i Josefa fa nitomany izy raha nahita ireo rahalahiny indray sy niaina ny sasany tamin'ireo fihetsehampony tamin'ny lasa.
lnona no asehon'ny teny nataon'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana mikasika ny fotoana tokony hamelana heloka? Vakio ny Lio. 23:34.
Tsy niandry antsika hangata-pamelana i Jesosy. Tsy voatery hiandry izay nanao ratsy tamintsika hangata-pamelana koa isika, fa azontsika atao ny mamela ny heloky ny hafa kanefa tsy manery azy handray izany famelan-keloka izany.
lnona no ampianarin'ny Lio. 6:28 sy ny Mat. 5:44 momba ny tokony hataontsika amin'ireo nandratra antsika?
Manomboka amin'ny safidy ny famelan-keloka, toy ny fitiavana ihany, fa tsy amin'ny fihetsehampo. Azontsika atao ny misafidy hamela heloka na dia tsy miombon-kevitra amin'izany aza ny fihetsehampontsika. Fantatr'Andriamanitra fa tsy vitantsika amin'ny herintsika irery izany safidy izany, fa "ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra"- Mar. 10:27. Izany no andrisihana antsika hivavaka ho an'ireo izay nandratra antsika. Mety efa nisy nodimandry ireny olona ireny, kanefa azontsika atao hatrany ny mivavaka mba hahay hamela ny helony.
Tsy isalasalana ny tsy maha-mora mandrakariva ny mamela heloka. Mety nanimba antsika, namela ratra tao am-pontsika sy nampahalemy ary nanorotoro antsika mihitsy ny alahelo sy ny zavatra ratsy nataon'ny hafa antsika. Ho tonga amintsika anefa ny fahasitranana raha manaiky izany isika; manasarotra ny fanasitranana kosa ny fangidiana sy ny hatezerana ary ny otripo, mety hanakana izany mihitsy aza.
Ny hazo fijaliana no fanehoana tsara indrindra ny sandan'ny famelan'Andriamanitra ny helotsika. Raha zava-dehibe tahaka izany no nataon'Andriamanitra ho antsika, na dia fantany aza fa maro no handà Azy, dia azontsika atao ihany koa ny mianatra mamela heloka.
Iza no tokony havelanao heloka - raha tsy noho ny amin'io olona io aza izany fa noho ny aminao?
Mahatsapa fiadanana rehefa mamela heloka
Tonga tany Egipta ny fianakavian'i Josefa nony farany. Tsy nisy tsiambaratelo niafinafina intsony teo amin'izy ireo. Azo antoka fa niaiky ireo rahalahiny fa nivarotra azy, rehefa nanazava tamin-drainy fa ilay zanany izay noheveriny fa maty dia tonga praiministra any Egipta ankehitriny.
Mety tsy azo atao mandrakariva na koa fanapahan-kevitra tsy hendry ny hamerina amin'ny laoniny ny fifandraisana, saingy tsy midika izany fa tsy azo atao ny mamela heloka. Mety tsy hamihina ilay olona nanisy ratsy antsika isika ary hiara-mitomany aminy, kanefa mety irintsika ny hanonona famelana ho azy na hanao izany an-taratasy. Rehefa izay dia tokony havalontsika araka izay azontsika atao indrindra ny alahelo mifandraika amin'izany. Mety hisy ratram-po hitoetra mandrakariva, kanefa fara-fahakeliny dia eo an-dalam-pahasitranana amin'izany isika.
Vakio ny Gen. 50:15-21. Inona no nampitebiteby ireo rahalahin'i Josefa, ary nahoana izy ireo no natahotra ny amin'izany zavatra izany? Inona ny hevitra asehon'izany tahotra izany?
Nonina tao Egipta nandritra ny 17 taona ireo rahalahin'i Josefa (Gen. 47:28), kanefa nony nodimandry i Jakôba dia natahotra izy ireo andrao hamaly faty azy i Josefa. Nitamberina tao an-tsain'izy ireo indray ny ratsy lehibe nataony taminy. Nanome toky azy ny amin'ny namelany ny helok'izy ireo indray anefa i Josefa, na dia taorian'ny nahafatesan-drainy aza. Azo heverina fa nitondra soa ho an'i Josefa sy ho an'ireto rahalahiny ireto izany.
Arakaraka ny halalin'ny ratra no tsy maintsy hamelantsika heloka imbetsaka. Rehefa mitamberina ao an-tsaina ny tsiaro ny toe-javatra ratsy niseho dia ilaintsika ny mankeo amin'Andriamanitra haingana amin'ny alalan'ny vavaka ka misafidy ny hamela heloka indray.
Vakio ny Gen. 50:20. Ahoana no anazavan'io andalan-teny io, na dia amin'ny ampahany aza, ny fahavononan'i Josefa hamela ny helok'ireo rahalahiny?
Ninoan'i Josefa tokoa fa tao anatin'ny drafitra lehiben'Andriamanitra ny toe-javatra teo amin'ny fiainany, mba hanampiana ny tany tsy ho tratry ny mosary, ary avy eo mba hanampiana ny fianakaviany hanatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny hahatonga azy ho firenena lehibe. Nanampy azy hamela ny heloky ny rahalahiny ny fahalalana fa nofoanan'Andriamanitra ireo drafitra feno haratsiam-panahin'ireo rahalahiny.
Tsara fiafara ny tantaran'i Josefa. Ahoana ny fihetsehampontsika rehefa tsy dia tsara loatra ny fiafaran'ny tantara iray? Sa azontsika ambara fa rehefa tsy hisy intsony ny fahotana ary hifarana ny fifanandrinana lehibe, rehefa ho voavaha ny olana rehetra, dia hisy ny fiafarana tsara? Ahoana no hanampian'izany fanantenana izany antsika hiatrika ireo fiafaran-javatra tsy dia tsara loatra?
"Toy ny nivarotan'ny rahalahiny an'i Josefa no nivarotan'ny mpianany anankiray an'i Jesôsy Kristy tamin'ny fahavalony loza indrindra. I Josefa, noho ny fahadiovany dia notenenina ratsy sady nampidirina tao an-tranomaizina. Dia toy izany koa i Jesôsy, noho ny fiainany masina sy lavitry ny fitiavan-tena, (fiainana masina manameloka ny fahotana), dia notsiratsiraina sy nolavin'ny olona, ary farany, nohelohina noho ny fiampangana nataon'ny vavolombelona mandainga. Farany, ny faharetana sy ny fahalemem-panahy nasehon'i Josefa teo anatrehan'ny tsy fahamarinana sy ny fampijaliana rehetra, ny fahavononany hamela heloka, ny fahalalaham-pony tamin'ny rahalahiny, dia samy tandindon'ny fahanginana sy ny toe-tsaina famelezan'ny ratsy fanahy, Azy, sady maneho koa ny famelan-keloka natolony ireo mpamono Azy, sy mbola hatolony koa ho an'izay rehetra manatona Azy sy miaiky ny fahotany ary mangataka famindrampo Aminy. "- PM, t. 225. "
¨Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona hianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny Rainareo"-Mat. 6:15. Tsy misy na inona na inona afaka manamarina fanahy tsy mahay mamela heloka. Izay tsy mamindra fo amin'ny hafa dia mampiseho fa ny tenany koa aza tsy mpiray amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mamela heloka. Ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia misarika ny fon'ilay nanao fahadisoana ho eo akaikin'Ilay fitiavana tsy manam-petra. Mikoriana ao amin'ny fanahin'ny mpanota ny fiboiboiky ny fangorahan'Andriamanitra, ary avy ao dia mankany amin'ny fanahin'ny hafa. Ny toetra antra sy ny famindrampo izay nahariharin'i Kristy teo amin'ny fiainany sarobidy dia ho hita eo amin'ireo izay tonga mpiray amin'ny fahasoavany."- HF, tt. 211, 212.
1. Izao no nambaran'ny olona anankiray indray andro: "Ny tsy fetezana hamela heloka dia tahaka ny fisotroana poizina kanefa ny hafa no antenainao ho faty amin'izany." Inona no tian'izany hambara?
2. Inona ny tanjon'ireo fizahan-toetra nataon'i Josefa talohan'ny nanambarany tamin'ny rahalahiny fa izy no Josefa? Inona no nentin'izany ho azy sy ho an'ireo rahalahiny ireo?
3. Azo antoka fa niray tetika tamin'ireo fizahan-toetra sasany nataon'i Josefa ny mpikarakara ny ao an-tranony (Gen. 44:1-12). Ahoana ny fiantraikan'ny fanandraman'ny famelan-keloka eo amin'ireo izay mitazana ety ivelany?
4. "Tsy mitarika ny zanany amin'ny fomba hafa noho izay nofidin'izy ireo hitarihana azy mihitsy Andriamanitra, raha hitan'izy ireo ny voalohany sy ny farany, ka fantany ny voninahitry ny fikasana tanterahiny amin'ny maha-mpiara-miasa Aminy azy."- IFM, t. 230.
Eritrereto ny fiainanao eo am-pandinihana io fanambarana io. Ahoana no anampian'ny fahatakarana izany antsika hiatrika ireo fitsapana sy ady mafy?